Home Somali News USA: Maamulka Columbus Ohio oo diiday Xijaabka Haweenka Booliiska
Duqa magaalada Columbus Ohio ee dalka Maraykanka Mr.Michael B. Coleman ayaa taageeray go’aan kasoo baxay Taliska booliiska magaaladaasi oo dhawaan diiday in haweenka muslimka ah ee kamid noqonaya Booliiska ay xirtaan xijaabka.
Arrintan ayaa dood xoogan ka dhalisay magaalada Columbus Ohio iyadoo ay jireen dad si weyn u taageersanaa in haweenka Booliiska ay xirtaan xijaabka kuwaasi oo u badnaa Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi.
Ismahaan ayaa sheegtay in Xijaabka uu kamid yahay diinteeda iyo dhaqankeeda, uuna qeyb ka yahay shaqsiyadeed lagu aqoonsado, ayaa waxay sheegtay inay diyaar u tahay inay kamid noqoto ciidamada Booliiska hadii loo fasaxo in xijaabka ay xirato.Doodan ayaa bilaabatay kadib markii haweenay Soomaali ah oo lagu magacaabo Ismahaan Ciise oo horaantii sanadkan isaga baxday akademiyada Booliiska kadib markii loo diiday inay xirato xijaabka.
Balse Taliska Booliiska Columbus Ohio ayaa sheegay inaysan si gaar ah uga soo horjeedin xijaabka, balse diidayaan dhamaan astaamaha diinta, sida afhayeenka Booliiska Columbus u sheegay Horseed Media, wuxuuna intaasi raaciyey astaamaha diinta ay meesha ka saareyso dhex dhexaadnimada Booliiska.
“…Shacabka marka ay arkaan askarta Booliiska, maaha inay arkaan Askari Kirishtaan ah, ama Muslim ah ama Yuhuud ah, balse waa inay arkaan Askari dhex dhexaad ah….” ayuu yiri Duqa magaalada Columbus Michael B. Coleman.
Dalalka Maraykanka iyo Canada ayey ka jiraan magaalooyin qaarkood sida gobalada Minnesota iyo Texas inay ciidamadooda booliiska ogolaadaan in askartooda ay xirtaan xijaabka, balse go’aankaasi ayaa ah mid u gaar ah inay gaaraan Taliyayaasha ciidamada degmooyinka iyo maamulka degmada.
Maamulka Columbus ayaa sheegay inay dhawaan sameyn doonaan kulan balaaran oo ay ku dhiiri gelinayaan in dadka laga tiro badan yahay oo ay ku jiraan Jaaliyadda Soomaalida inay kusoo biiraan ciidamada Booliiska ee magaaladaasi.
Xijaabka Haweenka Booliiska ee US